Izindlela Ezi-2 Eziyisisekelo Zokuzindla - U-Edwin Van Der Hoeven
~ Ukuzindla, njenge-yoga, kulwela ubunye. Izinhlobo zokuzindla ezaziwayo zaseMpumalanga yilezi: Ukuzindla kweTranscendental, Ukucabanga, iVipassana, uShamatha neZen. ~
Kunamasiko namagama amaningi ahlukahlukene akhombisa uhlobo lokuzindla; Ukuzindla kweTranscendental, Mindingly, Vipassana, Shamatha, Zen njll. Ukuzindla kuvame ukucatshangwa ukuthi kunenhloso yokuphumula, kepha lokhu kuqinisile, ukuphumula okuningi ikakhulukazi kuwumphumela. Ukuzindla kuyindlela ye iyunithi ukufezekisa lokho okushiwo yi-Yoga.
Ukuzindla nokukhulisa ukuqwashisa
Lapho umuntu ekhuluma ngokuthuthuka kokuqonda bese ukuzindla 'kuyisimo sokwazi'. Isimo sokwazi ngalo mqondo sidlula amasiko asinikeza izindlela zokukufeza isimo sokuba ukuza. Kuyo yonke le minyaka, bengingakaze ngifundise amasiko athile, kodwa kunalokho izindlela zokuthola isimo sokuzindla sokwazi. Izici eziningi zingahlukaniswa kulokhu;
Wonke umuntu unamandla athile okucabanga, ngokuzindla okusebenzayo sigxila kulokho. Futhi kubizwa ngokuba noma ukuma 'ngamandla akho'. Ubuciko, ukucabanga kanye nombono imvamisa kungumphumela wale ndlela esebenzayo yokuzindla.
Kwaziwa kwabaningi abazindla; isimo sokwamukela 'ukuba' lapho sizama ukwehlisa imicabango yethu. Ngaleyo ndlela sihlangana nengqondo yethu enganakile. Le ndlela yokuzindla engenzi lutho ivame ukusikhombisa ukuthi imicabango yethu imatasa kangakanani ngaphambi kokuthola ukuthula.
Ukuthinta kwami ​​kokuqala ngokuzindla kwaba ngokusebenzisa ubuBuddha e1993. Ngokushesha nje, ngaqala nokugcwalisa indlala yami engokomoya ngezincwadi zaseKrishnamurti. Kimi konke bekuphathelene nento eyodwa: ukuziqonda ngokwakho.
Ngemuva kweminyaka eminingi yokufunda, ukubuyisa kanye nokuhlangenwe nakho okungaqondakali, ngiyabona ukuthi kuningi kangakanani engingakakwazi. Awukho umgomo wokuphela, kunendlela eyodwa kuphela. Uhamba phezu kwalo futhi uzibuze isikhathi nesikhathi futhi!
Ukuphefumula kwakho njengekhampasi
Ukuphefumula kubalulekile ngazo zonke izindlela zokuzindla. Uma ukhuluphele noma ucindezelekile, uphefumula ngokushesha kunalapho ulele, ngokwesibonelo. Ukuphefumula-ke kukhombisa ukuthi sinjani isimo sethu senqondo, kepha-ke futhi kuyindlela yokusiphumuza ukuze siphumule. I-Pranayama yoga yindlela yokuzijwayeza ukuphefumula. Ngibuye ngisekele ulwazi lwami kanye nesipiliyoni kuKriya Yoga kanye nokuphefumula kweJajayi okwaziwa nge-yoga.
Iziqinisekiso: isimo esihle
Uma uke waya eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, cishe uzobona lezo ziphonso ezinhle noma ama-mantras. I-mantra iyindlela yokugcina imicabango yakho ihlanzekile futhi igxile ekuzindleni lapho uvame ukukhombisa khona inhlonipho kothisha noma umphathi wezomoya. Ngendlela efanayo ukusetshenziswa kweziqinisekiso, okwaziwa kahle ngabantu abafunde Imfihlo. Isiqinisekiso isitatimende esakhayo;
hhayi: "Ngingathanda ukujabula kakhudlwana"
Kunezinhlobo eziningi zokuvuma futhi ngithanda ukuhlanganyela nenye ephumelela kakhulu nawe indlela elula yokwazisa iziqinisekiso ngokuzindla kwakho.
Ama-Mantras amemeza - ithoni nesigqi
I-8 Januwari, 2014